November 2017 – Page2– Thadin Media
25,May,2017- ​သောင်းကျန်းသူ MNDAA ၏ ပှိုင့်​ 735527-အား တပ်​မ-၇၇ ဖိုက်​တာ များမှသိမ်း ပိုက်​ရရှိခဲ့ ပုံအဆင့်​ ဆင့်​ အား​​ ​ကောင်းကင်​မှ ဒရုန်းဖြင့်​ ရိုက်​ကူး ထား​သော မှတ်​တမ်းတင် ​ဓါတ်​ပုံများ အပိုင်း -၂
November 24, 2017 adminLocal News
အချစ်အတွက် မိုက်ရူးရဲဆန် သူမရဲ့လက်ကို ဓါးနဲ့လှီး အချစ်သက်သေပြလိုက်တဲ့ ရှမ်းမလေး နန်းဟွန်းဆိုင်း
[Zawgyi] ရှမ်းမလေး နန်းဟွန်းဆိုင်းကတော့ သူမရဲ့ ချစ်သူက လမ်းခွဲသွားလို့ သူမရဲ့လက်ကို ဓါးနဲ့လှီးပြီး အချစ်သက်သေပြတဲ့ ပုံတွေ Facebook ပေါ် ရေးသားဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်။ အချစ်​အတွက်​နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်​ကို အဲ့​ဒီလောက်​ထိ မ​ပေးဆပ်​သင့်​ဘူး ထင်​ပါတယ်​။ ဘာပဲပြောပြော နန်းကတော့ သူမရဲ့ ချစ်သူအတွက် ပေးဆပ်မှုတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ အချစ်ကြောင့်နဲ့ အဲလောက်ထိ မရူးမိုက်ပါနဲ့နန်းရယ် သူများမချစ်လို့ လမ်းခွဲသွားပြီပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ချစ်လိုက်စမ်းပါ။ လူတွေဟာ ချစ်သူအတွက်ဆို လုပ်ရဲကြပြီး မိဘအတွက်သာ သွေးထွက်အောင်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် နို့ ၂ လုံးဖိုး…
ရခိုင်ပြည်ကြီးသာ ခွဲထွက်သွားရင် ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲ ?
[Zawgyi] ရခိုင်ပြည်ကြီးခွဲထွက်သွားရင် ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲ ? ***************************************** ရခိုင်ပြည်နယ်ကြီး ခွဲထွက်သွားရင် ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲ ? ရခိုင်ပြည်နယ်အကြောင်း မပြောခင် ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် နယ်မြေချင်း ထိစပ်နေသော ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံရဲ့ ပထဝီအနေအထားကို လေ့လာကြည့်ရအောင့့့်  ။ ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဟာ စတုရန်းမိုင်ပေါင်း ၅၆,၉၇၇ ရှိပြီး လူဦးရေ ၁၇၁,၇ သန်းရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံထက် အကျယ်အဝန်း ၄ဆကျော် သေးငယ်ပြီး လူဦးရေမှာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူဦးရေထက် ၃ဆထက်များသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။ နိုင်ငံကျဉ်းမြောင်းသော်လည်း လူဦးရေထူထပ်သော နိုင်ငံတစ်နိုင်…
ပြောက်ကျားဝတ်စုံဖြင့် ညီလာခံတက်ရောက်ခဲ့သော ထားဝယ်အမျိုးသားတပ်မတော်ဆိုသည့် အဖွဲ့ကို တရားမဝင်သဖြင့် ဖျက်သိမ်း
[Zawgyi] ထားဝယ်အမျိုးသားညီ လာခံသို့ ပြောက်ကျားယူနီဖောင်း ဝတ်ကာ တက်ရောက်ခဲ့သည့် ထားဝယ်အမျိုးသားတပ်မတော် ဆိုသော အဖွဲ့သည် တရားမဝင် သဖြင့် ဖျက်သိမ်းခိုင်းခဲ့ပြီး နောင် ယင်းသို့ ထပ်မံပြုလုပ်ပါက အရေးယူမည်ဟု တနင်္သာရီတိုင်းဒေသ ကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီး နေမျိုး က ပြောသည်။ ‘‘ယူနီဖောင်းတွေထုတ်ချုပ်၊ ထားဝယ်ကိုပဲ ကိုယ်စားပြုတဲ့ပုံစံ။ ယူနီဖောင်းတွေ ချွတ်ခိုင်းတယ်။ ဆိုင်းဘုတ်တွေ၊ ဌာနချုပ်တို့ဘာတို့ တကယ်တော့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ပထမတော့ အမှုဖွင့်မလို့ပဲ။ နောက်တော့ သူတို့က ယူနီဖောင်း တွေ လာအပ်တယ်။ ဆိုင်းဘုတ် တွေလည်း ဖြုတ်လိုက်ပြီ။…
၈နှစ်သမီး သက်ငယ်မှုဒိန်း ကျူးလွန်သူမှာ အဖမ်းမခံပဲ ပြန်လည်တိုက်ခိုက်သဖြင့် လုံးထွေးဖမ်းဆီးခဲ့ရ (ရုပ်သံ)
[Zawgyi] သက်ငယ်မှုဒိန်း ကျူးလွန်သူမှာ အဖမ်းမခံပဲ ပြန်လည်တိုက်ခိုက်သဖြင့် လုံးထွေးဖမ်းဆီးခဲ့ရ (ရုပ်သံ) အဖမ်းမခံဘူး လက်ထဲမှာသားရေခွ ဘေးမှာဓား.အရှေ့မှာ ပုလင်းရိုက်ခွဲပြီးချထားတာသုံးလုံးတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုတောင်ပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်တယ်လုံးထွေးဖမ်းခဲ့ရပါတယ် တရားဥပဒေအရသက်ငယ်မုဒိန်းသေဒဏ်တောင်းဆိုပေးကြပါ သေဒဏ်ပေးပါ ဒေါသထွက်နေတဲ့လူတွေကိုမနည်းထိမ်းပေးရပါတယ် သံ ဗြက်‎ [Unicode] သကျငယျမှုဒိနျး ကြူးလှနျသူမှာ အဖမျးမခံပဲ ပွနျလညျတိုကျခိုကျသဖွငျ့ လုံးထှေးဖမျးဆီးခဲ့ရ (ရုပျသံ) အဖမျးမခံဘူး လကျထဲမှာသားရခှေ ဘေးမှာဓား.အရှမှေ့ာ ပုလငျးရိုကျခှဲပွီးခထြားတာသုံးလုံးတာဝနျရှိတဲ့သူတှကေိုတောငျပွနျပွီးတိုကျခိုကျတယျလုံးထှေးဖမျးခဲ့ရပါတယျ တရားဥပဒအေရသကျငယျမုဒိနျးသဒေဏျတောငျးဆိုပေးကွပါ သဒေဏျပေးပါ ဒေါသထှကျနတေဲ့လူတှကေိုမနညျးထိမျးပေးရပါတယျ သံ ဗွကျ‎
ကုန်တင်ကားနဲ့ ခရီးသည်တင်ပေါင်မုန့် ကား ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ် ၁၄ ဦး မီးလောင်သေဆုံး
[Zawgyi] ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၄ ဦး မီးလောင်သေဆုံး နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့ဒီကနေ့နံနက် နှစ်နာရီအချိန်ကထိုင်းနိုင်ငံ စင်ဘူရီ ပြည်နယ် အာရှလမ်းမကြီး မိုင်တိုင်အမှတ် ၉ ဝ-၆၀၀ မှာ လိုင်စင်နံပါတ် 81-7407 Nakhon Sawan (နကော်စဝမ်) ကုန်တင်ကားနဲ့ မဲဆောက်ကနေ ဘန်ကောက်ကိုမောင်းလာတဲ့ ခရီးသည်တင်ပေါင်မုန့် ကား လိုင်စဉ်နံပါတ် 33-3241 Bangkok (ဘန်ကောက် ) တို့တိုက်မိပြီး ခရီးတင် ကားတစီးလုံးမီးလောင်သွားခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ပေါင်မုန့်ကားမောင်သူ ထိုင်းနိုင်ငံသားအပါအဝင် မဲဆောက်မြို့ကနေ…
ရန်ကုန်တွင် ဘုရား ဆင်းတုတော်နှ င့် နတ်ရုပ် ထုများကို ခိုးယူသူများ အား ဖမ်းဆီးရမိ
[Zawgyi] ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ စေတီပုထိုးများမှ ဘုရားဆင်းတုတော်များနှင့် နတ်နန်း များမှ နတ်ရုပ်ထုများကို ခိုးယူသူများအား နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက် နေ့လည် ၁ နာရီအချိန်တွင် ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ သံလွင်လမ်းရှိ၊ ဓာတ်ပေါင်းစုစေတီအနီးတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း သိရသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ခိုး၊ ဆိုး၊ လု၊ နှိုက် ကျူးလွန်သူများအား ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရရှိရေးအတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ မှုခင်းဖော်ထုတ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက နယ်မြေအတွင်း သတင်းစုံစမ်းစဉ် လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊(၁)ရပ်ကွက်နေ မသန္တာ(ခ)သန္တာကြည်(၃၉)နှစ်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊…
AAရဲ့ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် သေဆုံးသွားတဲ့ ကျောင်းသားရဲ့ အကိုက AAကို မဆင်မခြင် မပစ်ခတ်ရန် ပြောကြား